China cufflinks & Tie neeBhari mveliso kunye nabathengisi
Ukunxiba okuchukumisayo kufuneka kube kunye ne-cufflink okanye i-tie bar. Zizipho ezilungileyo ezilungileyo zomhla kaTata, ukuthweswa isidanga, isikhumbuzo, usuku lokuzalwa, umtshato okanye malunga nawo nawuphi na umsitho wamadoda. Umsebenzisi unokubeka ii-cufflinks kwiisuti, ihempe okanye iimpahla ezisemthethweni zemihla ngemihla okanye nakuphi na ukusetyenziswa kwesihlandlo, ngelixa ibhloko enye ye-pc tie inokuba yingqokelela yomntu ngamnye. Izipho eziCwebezelayo zinamava eminyaka engama-36 ekuveliseni ii-cufflinks ezikumgangatho ophezulu kunye nemivalo yokubopha, izitayile zinokuba zezodidi, imfashini, ubunewunewu, zilula ngendlela othanda ngayo. Inkqubo yethu yokutyabeka kunye nokuzaliswa kombala kuya kwenza ukugcina into 'ukuqaqamba komelele, ngapha koko, uyilo olutsha oluvulekileyo olutsha luyafumaneka ukuba ukhethe. Ukucaciswa: ● Vula uyilo lokhetho ● Imilo, izinto eziphathekayo, ubukhulu, imibala eyenziwe ngokwezifiso ● Umbala: isiseko kunye nesingxobo, umphezulu wokupeyinta, ukugcwalisa umbala, ukuprinta ● Ilogo: Ukunyathela, Ukuphosa, ifoto ebotshiweyo, ekroliweyo, eprintiweyo, isincamathelisi se-epoxy. ● Iphakheji: 1pcs / ibhegi eninzi, ukupakisha ibhokisi yesipho kuyafumaneka okanye ngokweemfuno zabathengi
I-Tie Bar / iTie Clip / iTeyidi yeSilayidi
Ihotele eNtofontofo kunye neCufflink entle